ကိုယ့်မေတ္တာတွေကို တန်ဖိုးထားတဲ့ ရင်ခွင်မှာပဲ ကျွန်မ ပျော်မွေ့ချင်တယ် – Shinyoon
နယူတန်ပြောတဲ့ သက်ရောက်မှုတိုင်းမှာ တန်ပြန်သက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့နိယာမကို ကျွန်မက ကိုယ်ပေးတဲ့အတိုင်း ပြန်လာလာလိမ့်မယ်လို့ တစ်ယူတန် တွေးခဲ့မိတယ်
တကယ်တော့ ကျွန်မဘက်က စေတနာသန့်သန့်လေးတွေ ထားခဲ့ပေမယ့် စော်ကားခံရတာတွေ ပြန်ရလာခဲ့တယ်မေတ္တာတွေ ပေးနေပေမယ့် လျစ်လျူရှုခြင်းတွေသာ ပြန်ရလာခဲ့တယ် ဂရုစိုက်မှုတွေလဲ ထပ်တူပါပဲ အလေးမထားခြင်းတွေသာ ပြန်ရလာခဲ့တာလေ ကိုယ့် မေတ္တာလဲ စစ်မှန်ခဲ့ပါတယ် ပြန်ရလာတာ မရလာတော့ ကျွန်မကံပေါ့
ကံကိုပဲ ရိုးမယ်ဖွဲ့ရုံပဲ ကျန်တော့တာလေ ကျွန်မ ဘာများတတ်နိုင်ခဲ့လို့လဲ တစ်နေ့နေ့တချိန်ချိန်မှာတော့ နားလည်သဘောပေါက်လာမှာပါဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ အခုချိန် ခဏတဖြုတ် နာကျင်ခံစားရရုံပဲ ရှိတာပါ
ကိုယ်ပေးတဲ့ စေတနာတွေအတွက် ပြန်ပြီး တန်ရာတန်ကြေးရလိမ့်မယ်လို့ စျေးတွက်တွက်ပြီး ပေးခဲ့တာမှ မဟုတ်ပဲကျွန်မ ကျေနပ်ပါတယ် . . . ဒါပေမယ့် ကျွန်မ တန်ဖိုးကို နားလည်လာတဲ့အခါကျရင်သာ အရမ်းနောက်ကျမသွားစေနဲ့ပေါ့
ဟိုးအဝေးကြီးရောက်သွားမှ ပြန်လိုက်ခေါ်လို့လဲ ကျွန်မ ပြန်လှည့်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူး အရာအားလုံးကို လျစ်လျူရှုနိုင်ပြီးမှ ပြန်ပြီး ငဲ့ကြည့်ဖို့ တောင်းဆိုလဲ အပိုပဲလေ နောက်တစ်ခါ ဆုတောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ သက်ရောက်မှုတိုင်းမှာ ထပ်တူညီတဲ့ တန်ပြန်သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာပါစေလို့ပဲ ကျွန်မ ဆုတောင်းတော့မယ်
ကိုယ့်စေတနာတွေ မြင်နိုင်တဲ့ အရပ်မှာပဲ အသက်ရှင်ရပ်တည်ချင်တယ် ကိုယ့်မေတ္တာတွေကို တန်ဖိုးထားတဲ့ ရင်ခွင်မှာပဲ ကျွန်မ ပျော်မွေ့ချင်တယ် ဒီလောက်ပါပဲ ။
နယူတန္ေျပာတဲ့ သက္ေရာက္မႈတိုင္းမွာ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈရွိတယ္ဆိုတဲ့နိယာမကို ကြၽန္မက ကိုယ္ေပးတဲ့အတိုင္း ျပန္လာလာလိမ့္မယ္လို႔ တစ္ယူတန္ ေတြးခဲ့မိတယ္
တကယ္ေတာ့ ကြၽန္မဘက္က ေစတနာသန္႔သန္႔ေလးေတြ ထားခဲ့ေပမယ့္ ေစာ္ကားခံရတာေတြ ျပန္ရလာခဲ့တယ္ေမတၱာေတြ ေပးေနေပမယ့္ လ်စ္လ်ဴရႈျခင္းေတြသာ ျပန္ရလာခဲ့တယ္ ဂ႐ုစိုက္မႈေတြလဲ ထပ္တူပါပဲ အေလးမထားျခင္းေတြသာ ျပန္ရလာခဲ့တာေလ ကိုယ့္ ေမတၱာလဲ စစ္မွန္ခဲ့ပါတယ္ ျပန္ရလာတာ မရလာေတာ့ ကြၽန္မကံေပါ့
ကံကိုပဲ ႐ိုးမယ္ဖြဲ႕႐ုံပဲ က်န္ေတာ့တာေလ ကြၽန္မ ဘာမ်ားတတ္ႏိုင္ခဲ့လို႔လဲ တစ္ေန႔ေန႔တခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ နားလည္သေဘာေပါက္လာမွာပါဆိုတဲ့ အေတြးနဲ႔ အခုခ်ိန္ ခဏတျဖဳတ္ နာက်င္ခံစားရ႐ုံပဲ ရွိတာပါ
ကိုယ္ေပးတဲ့ ေစတနာေတြအတြက္ ျပန္ၿပီး တန္ရာတန္ေၾကးရလိမ့္မယ္လို႔ ေစ်းတြက္တြက္ၿပီး ေပးခဲ့တာမွ မဟုတ္ပဲကြၽန္မ ေက်နပ္ပါတယ္ . . . ဒါေပမယ့္ ကြၽန္မ တန္ဖိုးကို နားလည္လာတဲ့အခါက်ရင္သာ အရမ္းေနာက္က်မသြားေစနဲ႔ေပါ့
ဟိုးအေဝးႀကီးေရာက္သြားမွ ျပန္လိုက္ေခၚလို႔လဲ ကြၽန္မ ျပန္လွည့္လာေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး အရာအားလုံးကို လ်စ္လ်ဴရႈႏိုင္ၿပီးမွ ျပန္ၿပီး ငဲ့ၾကည့္ဖို႔ ေတာင္းဆိုလဲ အပိုပဲေလ ေနာက္တစ္ခါ ဆုေတာင္းျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ သက္ေရာက္မႈတိုင္းမွာ ထပ္တူညီတဲ့ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိလာပါေစလို႔ပဲ ကြၽန္မ ဆုေတာင္းေတာ့မယ္
ကိုယ့္ေစတနာေတြ ျမင္ႏိုင္တဲ့ အရပ္မွာပဲ အသက္ရွင္ရပ္တည္ခ်င္တယ္ ကိုယ့္ေမတၱာေတြကို တန္ဖိုးထားတဲ့ ရင္ခြင္မွာပဲ ကြၽန္မ ေပ်ာ္ေမြ႕ခ်င္တယ္ ဒီေလာက္ပါပဲ ။